Isiphanyeko factory, abahlinzeki - China isiphanyeko Manufacturers
I-UL & FM Esohlwini Lwesisindo Esisindayo se-Hevis Isigaxe Esishubile
Njengenye yeziphanyeko ezincintisana kakhulu zenkampani, iziphanyeko zethu ezisindayo zezinsimbi iziphanyeko zivunyelwe i-UL & FM. Futhi bathole ukuthandwa okukhulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eNyakatho Melika, eNingizimu Melika, eMpumalanga Ephakathi, eYurophu nase-Asia. Futhi, zingenziwa ngezifiso ngokuya ngezidingo zakho, ngokwesibonelo, zingakhiwa ngenjoloba, ukufaka noma isihlangu. Futhi kukhona izindlela zokwelapha ezihlukile ongakhetha kuzo: Oku-lashukumisa kwangaphambili, i-Zinc, i-epoxy no-Green galvanized kumaliza ukuhlangabezana nezidingo zakho zokulwa nokugqwala kwamazinga ahlukene.
I-UL efakwe kuhlu lwe-Light Duty Clevis Hanger ye-Factory Direct Sales
Njengenye yeziphanyeko ezincintisana kakhulu zenkampani, iziphanyeko zethu zomsebenzi okhanyayo zivunyelwe i-UL. Futhi bathole ukuthandwa okukhulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eNyakatho Melika, eNingizimu Melika, eMpumalanga Ephakathi nase-Asia. Futhi, zingenziwa ngezifiso ngokuya ngezidingo zakho, ngokwesibonelo, zingakhiwa ngenjoloba, ukufaka noma isihlangu. Futhi kukhona izindlela zokwelapha ezihlukile ongakhetha kuzo: Oku-lashukumisa kwangaphambili, i-Zinc, i-epoxy no-Green galvanized kumaliza ukuhlangabezana nezidingo zakho zokulwa nokugqwala kwamazinga ahlukene.
I-Copper Plated Light Duty Clevis Hanger ye-Factory Direct Sales
Njengomunye wabalengisi benkampani abancintisana kakhulu, iziphanyeko zethu zethusi ezifakwe ukukhanya zethusi zithole ukuthandwa okukhulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eNyakatho Melika. Futhi, zingenziwa ngezifiso ngokuya ngezidingo zakho, ngokwesibonelo, zingakhiwa ngenjoloba, ukufaka noma isihlangu. Futhi kukhona izindlela zokwelapha ezihlukile ongakhetha kuzo: Oku-lashukumisa kwangaphambili, i-Zinc, i-epoxy no-Green galvanized kumaliza ukuhlangabezana nezidingo zakho zokulwa nokugqwala kwamazinga ahlukene.
I-UL ne-FM efakwe kuhlu lwe-Swivel Ring Hanger ye-Factory Direct Sales
Njengenye yeziphanyeko ezincintisana kakhulu zenkampani, iziphanyeko zethu ezijikajiko zezingilazi zivunyelwe i-UL & FM Futhi bathole ukuthandwa okukhulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eNyakatho Melika, eNingizimu Melika, eMpumalanga Ephakathi, eYurophu nase-Asia. Futhi, zingenziwa ngezifiso ngokuya ngezidingo zakho, ngokwesibonelo, zingakhiwa ngenjoloba, ukufaka noma isihlangu. Futhi kukhona izindlela zokwelapha ezihlukile ongakhetha kuzo: Oku-lashukumisa kwangaphambili, i-Zinc, i-epoxy no-Green galvanized kumaliza ukuhlangabezana nezidingo zakho zokulwa nokugqwala kwamazinga ahlukene.
Ithusi Plated Swivel Ring isiphanyeko yethusi Tube
Njengenye yeziphanyeko ezincintisana kakhulu zenkampani, iziphanyeko zethu zethusi ezigoqwe ngethusi zithole ukuthandwa okukhulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eNyakatho Melika. Futhi zingenziwa ngezifiso ngokuya ngezidingo zakho, ngokwesibonelo, zingakhiwa ngenjoloba, ukufaka noma isihlangu. Futhi, kukhona izindlela zokwelapha ezihlukile ongakhetha kuzo: Oku-lashukumisa kwangaphambili, i-Zinc, i-epoxy no-Green galvanized kumaliza ukuhlangabezana nezidingo zakho zokulwa nokugqwala kwamazinga ahlukene.
I-UL ne-FM efakwe kuhlu lwe-Swivel Ring Hanger ene-Felt-ujenga
Njengezinye iziphanyeko ezincintisana kakhulu zenkampani, iziphanyeko zethu ezijikajikayo ezinezintambo ezizwakala zivunyelwe i-UL & FM. Bathole ukuthandwa okukhulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eNyakatho Melika. Futhi, zingenziwa ngezifiso ngokuya ngezidingo zakho, ngokwesibonelo, zingakhiwa ngenjoloba, ukufaka noma isihlangu. Futhi kukhona izindlela zokwelapha ezihlukile ongakhetha kuzo: Oku-lashukumisa kwangaphambili, i-Zinc, i-epoxy no-Green galvanized kumaliza ukuhlangabezana nezidingo zakho zokulwa nokugqwala kwamazinga ahlukene.